Madaxweynaha cusub ee dalka Gambia oo haweenay u magacaabay madaxweyne ku-xigeen - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldMadaxweynaha cusub ee dalka Gambia oo haweenay u magacaabay madaxweyne ku-xigeen
January 24, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Madaxweynaha cusub ee dalka Gambia Adama Barrow oo Fatoumata Tambajang Jallow u magacaabay madaxweyne ku-xigeen. [Sawirka: The Fatu Network (TFN)]
Dakar-(Puntland Mirror) Madaxweynaha cusub ee la doortay ee dalka Gambia Adama Barrow ayaa haweenay u magacaabay madaxweyne ku xigeenkiisa.
Fatoumata Tambajang Jallow oo ahayd diblomaasiyad hore oo Qaramada Midoobay ka tirsanayd sidoo kalena ahayd wasiirkii caafimaadka madaxweynihii hore Yahya Jammeh ayuu Barrow u doortay madaxweyne ku xigeen.
Madaxweyne Adama Barrow oo dhawaan lagu caleemosaaray dalka dariska ah ee Senegal ayaa la filayaa in asbuucaan gudihiisa uu tagi doono caasimada Gambia ee Banjul.
Barrow ayaa sidoo kale la filayaa in uu iclaamiyo golaha wasiiradiisa cusub, marka uu dalkiisa ku noqdo.
Mar sii horeysay, madaxweyne Barrow ayaa wariyeyaasha ugu sheegay gudaha dalka Senegal in uu dalkiisa dib ugu noqonayo marka la sugo ammaanka.
Axadii lasoo dhaafay, ciidamo millatari oo ka socda wadamada gobolka ayaa la wareegay madaxtooyada Gambia waxayna hubka ka dhigeen dhammaan ciidamada, ciidamada huwanta ah oo ku hubaysan taangiyo gaashaaman ayaa ilaalo ka haya caasimada Banjul.
Dhan kale, madaxweynihii hore Yahya Jammeh ayaa bilowgii asbuucaan ka tagay dalka uu 22-ka sanno hoggaaminayay isaga oo gaaray dalka Guinea.
Yahya Jammeh oo doorashadii madaxweynaha ee dhacday bishii December ee sanadkii lasoo dhaafay looga adkaaday ayaa diiday in uu xilka ka dego, balse markii dambe ayuu yeelay kadib markii dalalka Galbeedka Afrika ay ku hanjabeen in ay xilka uga tuurayaan awood milatari.